FOREX FUNDS: IZVOZVI NGUVA YOKUDYA. - FOREXFUNDS.COM
Kuchenjerera Forex Kutengesa Advisors
GWEDZIDZO KUNE FOREX FUNDS NEMABVUNZO
Muri pano: musha
FOREX FUNDS: IZVOZVI NGUVA YOKUDYA.
Ino ndiyo nguva yakanakisa yekudyara mune Forex Funds. Nekuti misika yakanyanya zvakabatana, haina kumbobvira yakatsoropodza kana kuomesa kuumba hwakasiyana mari yekudyara. Kuisa mari mune inochengetedzwa zvakanaka Forex fund kana yakachengetedzwa mari account inogona kudzikisira kufamba kwakashata muhuwandu hwepasi rose uye misika yemabond. Zvakare, zvakagadziriswa Forex zvigadzirwa zvinogona kupa goho rakakura kana mimwe misika iri kupfuura nepasi kukanganisa nguva. Nepo kusagadzikana kuchikwanisa kuunza njodzi, kunogona zvakare kuvhura mibairo yakakosha.
NEI FOREX FUNDS? NDATOGONA KUZIVA KUTI NDINOTADZIRA SEI
Forex mari inochengetedzwa account account chikuva.
Kungofanana ne zvakanaka-dzakasiyana portfolio inoumbwa nemabatirwo akasiyana siyana, marongero, makirasi easset, uye dzakasiyana mhando dzekudyara uye zviridzwa, saka inofanirwa kuita Foreign Exchange portfolio.
Vatengesi vane akakosha Forex mari mapotifoliyo anogona kuve nemaakaundi mazhinji, aine akasiyana masisitimu sezvakataurwa pamusoro, pamusoro pekuzvitengesa nekutengesa otomatiki marobhoti kana masitomendi pachavo.
Anotarisirwa Forex maAccounts kazhinji zvinoreva kuti muzvinashawo anobvumira maneja wemari kutengesa mari yeakaundi account, inochengetwa muzita remushambadzi uye kunyanya kune inodzorwa brokerage. Mvumo yekutengesa inopihwa pasimba rakatemerwa gweta (POA), iro rinongobvumidza kushambadzira (kwete kubvisa kana kuisa) nemaneja wehomwe kudzamara mvumo yakadaro yabviswa kana muzvinabhizimusi abvisa mari.
Vashandi vanoshuva kusagadzikana mukuita. Kufungidzira kuita ndiko kwakanyanya kukosha kweiyo Forex fund maneja maneja rekodhi. Ngatitii rekodhi rekodhi rekodhi rekodhi rinotsauka kubva munhoroondo yekuita Pakadaro, varimi vanogona kunetseka kuti mutengesi nzira yashanduka kana kuti haichashandi, izvo zvinogona kukurudzira vatengesi kudzikinura zvese kana chikamu chemari yavo. Ruzivo rwevatengesi veEngland vanonzwisisa kuti kurekodha rekodhi nekudzoka kusingagumi kwemakore mazhinji hakuna vimbiso yemhedzisiro inowirirana uye inobatsira mune ramangwana. Nekudaro, varimi vanofanira kugara vachitevedzera mashandiro evatengesi vavo uye vachizvienzanisa nezvakaitika kare. Kuongorora mashandiro enhoroondo achipokana nekudzoka-chaiko-nguva kudzoka kunofanirwa kuve chikamu chevashandisi vese kuferefeta nekuda kwekushingairira Process.
KUGADZIRA ZVISARUDZO ZVAKAOMA
Kune zvimwe zvakawanda zvinosiyanisa zvinhu, zvese zvakaenzana uye zvehunhu, izvo zvichave zvakakosha kune muzvinashawo kuti aongorore kuti angave ani achivhura account inotungamirwa neForex kana kuisa mari muhedge fund inotengesa mari.
Mukweretesi anogona kusiyanisa nekugadzira hombe Forex portfolio kana kuvandudza yakawanda-hodhi portfolio uko iyo Forex fund ichashanda seimwe yemusimari wekunze Kwekunze kuratidzwa. Inotungamirwa Forex haifanire kunge iri svikiro kune muzvinashawo yakazara mari inobata. Izvi zvinofanirwa kuve zvechokwadi zvisinei nemari yemadhora kana kuti yakawanda sei homwe muhomwe mune Assets Under Management (AUM). Panzvimbo iyoyo, inofanirwa kumiririra chikamu chekubata mutyairi anogovera kusiyanisa achitarisa purofiti / njodzi inogona.
ACCOUNT KUZARURA UYE FUNDI A FOREX FUNDS ACCOUNT. CHII CHINOTEVERA? CHII CHANDINOFANIRA KUTARIRA KUTI NDISIMESE?
Mazhinji tekinoroji inotungamirwa pamhepo Forex brokers anoshanda mumatare anotongwa anopa mapuratifomu uye kumashure-hofisi masevhisi kune vane hunyanzvi FX fund mamaneja nevatengi vavo. Nekudaro, haisi ese mari yemari inowanikwa kune ese brokerji. Heino muenzaniso wekufungidzira: ABC Forex Fund inogona kungojekesa mabasa avo kuburikidza neBig Forex Broker, asi kwete kuburikidza neBest Forex Broker; Nekudaro, mutengi anoda kuumba account neABC Forex Fund anofanirwa kuvhura account neBig Forex Broker kuti awane maneja wehomwe.
Kamwe kana Forex broker yasarudzwa, iyo account ichavhurwa uye kubhadharwa mari. Tevere, iyo magwaro ekuzivisa ichaongororwa uye kusayinwa nemushambadzi. Simba rakashomeka regweta (LPOA) rinofanirwa kusainwa nemusimari kuti ape manejimendi wekutengeserana mvumo yekutengesa account. Mukweretesi anofanira kuve nekwaniso kune chaiyo-nguva purofiti uye kurasikirwa zvirevo uye ese magumo-ezuva-ezvemishumo.
Kuteedzera iyo Forex Fund Mushure mekuita iyo Mari.
The mari yekudyara yehomwe inogona kusanganisira zuva nezuva, vhiki nevhiki, pamwedzi, kana pagore zvinangwa. Saizvozvo, mashandiro echikwama anofanirwa kuongororwa nguva nenguva kuti aone kana mashandiro achienderana nezvinotarisirwa nemusimari pakutanga. Iyi inzira yakakosha yekupa mhinduro kune vanoita mari kuti vataure kana kudyara kuri kuramba kuchienderana nezvinotarisirwa pakutanga.
Kana iko kushanda kwehomwe yacho kusiri kufambirana neyakaitika chaiyo kana fungidziro yezvakaitika kare, muzvinashawo anofanirwa kubata maneja wehomwe kuti abvunze kuti sei paita shanduko mukuita. Zvimwe zvikonzero zvinoita kuti kudzoreka kwenhoroondo kusakwanise kudzoka kwazvino kunosanganisira kuwedzera kusagadzikana mumusika kana chiitiko chisingafanoonekwe chezvematongerwo enyika. Kana muzvinashawo asina kugutsikana netsananguro yemaneja wehomwe maererano nekuita, muzvinashawo anofanirwa kufunga nezvekudzora mari yake kana kudhonza mari yake kubva kuForex fund.
Notional Funding uye Inotarisirwa Forex maAccounts: Yekubhadharira Mari Nzira
Notional mari inobvumira… [Verenga Zvimwe ...]